Ao anaty fifampiahiahiana… | NewsMada
Ao anaty fifampiahiahiana…
Par Taratra sur 29/11/2017
Fampihavanana inona no hataon’ny Komitin’ny fampihavanana malagasy (CFM)? Ho hita eo… Be ny milaza fa fampihavanana mpanao politika io. Ao ny mahita fa fampihavanana ny mpitondra amin’ny vahoaka, ohatra, no tokony hatao, fampihavanana ny samy Malagasy tsy hanaiky lembenana eo anatrehan’ny vahiny na hampiadian’ny hafa… Manginy fotsiny fampihavanana amin’ny tantaran’ny tena, ny kolontsaina, ny tontolo iainana…
Amin’izao toe-draharaham-pirenena, tandindomin’ny fifidianana 2018, izao: inona ny fampihavanana mety hatao na ho vita eo? Mifanao ankolafiny avy hatrany, ohatra, ny mpanao politika, fa tsy mety hihavana amin’ny fandrafetana ny lalàm-pifidianana: manao teniko fe lehibe ny mpitondra, manao ankifonofono sy kifitapitaka toy ny tamin’ny lalàna momba ny serasera… mamono fahafahana. Inona ny ho fampihavanana mpanao politika amin’izany?
Amin’ny fomba ahoana raha eo amin’ny vahoaka sy ny mpitondra indray ny fampihavanana? Mitombo hatrany ny elanelana: tsy mihaino vahoaka ny mpitondra fa ny ataony ihany no ataony amin’ny mahametimety azy sy ny tombontsoany, indrindra amin’ny fiatrehana ny fifidianana 2018. Tsy hita ny famahana olana sy fijerena ny hetahetam-bahoaka amin’ny tsy fandriampahalemana, fidangan’ny vidim-piainana, fandrobana tany…
Ahoana koa ny hampihavanana ny samy Malagasy, raha misy ny olona ambonin’ny lalàna, ohatra, amin’ireo tsimatimanota: akaiky ny mpitondra, olon’ny antokony… Misy ny faritra mahatsiaro ho zanak’Ikalahafa amin’ny fampandrosoana, na amin’ny fizarana fitaovana ho an’ny mpianatra ihany aza, ohatra. Tsy misy izany fihavanana amin’ny tantara izany fa tsy hain’ny mpitondra akana lesona, na amin’ny tontolo potehin’ny vahiny… Koa fampihavanana inona no hatao?
Efa resabe ny hoe: mpitondra tokony hampihavanina no manendry mpampihavana, ny tokony hampihavanina no mpampihavana… Tsy miainga avy any ifotony ny rafi-pampihavanana, fa avy any ambony toy ny fandraisana mpiasa amina orinasa: tsy misy hasina na ny olobe ara-drazana ihany aza, ohatra. Ahina hampiady ny fampihavanana ? Raha tsy izany, ho fombafomba ihany. Ho hita eo ny fampihavanana… ifampiahiahiana.